CAPGRAS SYNDROME ဆိုတာဘာလဲ။ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ကျန်းမာရေး
Capgras Syndrome: ရှားပါးစိတ်ရောဂါရောဂါ
နေအိမ် ကျန်းမာရေး ရောဂါများကိုကုသ Disorders ကုထုံး oi-Shivangi Karn မှ Shivangi Karn 2021 ဇန်နဝါရီလ 5, ရက်နေ့တွင်
'Capgras delusion' လို့လည်းခေါ်ကြတဲ့ Capgras syndrome ရောဂါဟာစိတ်ရောဂါရောဂါဖြစ်ပြီးလူတစ်ယောက်ကို (အထူးသဖြင့်သူတို့ချစ်ရသူ) ဒါမှမဟုတ်လူအုပ်စုတစ်စုဟာအသွင်အပြင်တူတဲ့အတားအဆီးတွေနဲ့နှစ်ဆပိုများလာတယ်လို့ယုံကြည်လာတယ်။
ဤမှားယွင်းသောမှားယွင်းစွာဖော်ထုတ်ခြင်းပုံစံသည်အလွန်ရှားပါးပြီးလက်ရှိရှိပြီးသားစိတ်ရောဂါနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအခြေအနေများဖြစ်သော Lewy ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဖောက်ပြန်မှု၊ cerebrovascular ဖြစ်စဉ်များသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်။ 
ဂျိုးဇက်ကက်ပရက်စ်ကပထမဆုံးဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Capgras Syndrome ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ပထမ ဦး ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ psychotic မမှန်ကျော်အခြေအနေသည်ပျံ့နှံ့နေသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ Capgras syndrome ရောဂါကိုအများအားဖြင့်အမျိုးသမီးများ၊ လူမည်းများနှင့် schizophrenics များတွင်တွေ့ရသည်။ [နှစ်ခု]
ဒီဆောင်းပါးမှာ Capgras syndrome ရောဂါအကြောင်း၊ အကြောင်းရင်းများနဲ့ကုသမှုများအကြောင်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါမယ်။ ကြည့်ပါ ဦး
Capgras Syndrome ၏အကြောင်းရင်းများ: ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာရေး
၁။ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုတစ်ခုက ၆၉ နှစ်အရွယ်မုဆိုးမတစ်ယောက်အကြောင်း Capgras ရောဂါခံစားနေရတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ အားလပ်ရက်ကနေပြန်လာပြီးတစ်ပတ်အကြာမှာသူမပတ် ၀ န်းကျင်ကလူတွေကိုသံသယ ၀ င်လာပြီးသူ့တိုက်ခန်းမှာသူမပိတ်ပင်ခဲ့တယ်။ ထိုအမျိုးသမီးသည်သူမ၏နေအိမ်တွင်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးမီးသတ်သမားများက၎င်းတို့သည်တကယ့်မဟုတ်သူများသာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
တစ်နေ့တွင်သူမသည်သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးများအားရေပုံးတစ်ပုံးကိုလောင်းပေးပြီးသူတို့လည်းသူမအိမ်နီးချင်းမဟုတ်ဟုဆိုခဲ့သည်။ သူမရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိချိန်တွင်သူမဘယ်ဘက်ဒူးတွင်တီဘီရောဂါအဆစ်အမြစ်စွဲနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မှတ်ဥာဏ်နှင့်သိမှုကဲ့သို့သောသူမ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သူမသည်ထို့နောက် neuroleptic ဆေးများနှင့်ကုသခံခဲ့ရသည်နှင့်ကောင်းစွာပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ 
၂။ နောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ဆီးချိုရောဂါကြောင့်အင်ဆူလင်ကိုထိန်းချုပ်ထားသောအသက် ၇၄ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အကြောင်းပြောဆိုသည်။ သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအင်ဆူလင်အလွန်အကျွံရှိသောကြောင့်သူမ၏သွေးသကြားသည်အလွန်နိမ့်ကျသွားပြီး၊
ဒီရောဂါလက္ခဏာမပြခင် ၁၅ လအကြာမှာသူမရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းကိုတွေ့ခဲ့ပြီးသူမရဲ့ခင်ပွန်းကိုမသိခဲ့ပါ။ ဖြစ်စဉ်များ၏အကြိမ်ရေအချို့လအနည်းငယ်အကြာတွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်, သူမ၏မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုလျော့နည်းခြင်းဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏
သူမသည်အရာများနေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ မီးဖိုချောင်သုံးများကိုမီးလောင်ရာနှင့်ပုတ်ခြင်းကိုပိတ်ထားရန်မေ့သွားသည်။ ရောဂါရှာဖွေပြီးနောက်သူသည်တိုတောင်းသောမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှု၊ ထို့အပြင်ပျော့ပျောင်းသောကျုံ့ခြင်း (အာရုံခံဆဲလ်ဆုံးရှုံးမှု) နှင့် Capgras syndrome ရောဂါရုတ်တရက်စတင်ဖြစ်ပေါ်စေသည့် microvascular ပြောင်းလဲမှု (ဦး နှောက်အတွင်းရှိသွေးကြောများပြောင်းလဲခြင်း) ရှိခဲ့သည်။
သင့်လျော်သောကုသမှု၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သူမ၏ဆီးချိုရောဂါကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်အခြေအနေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည် သို့သော်သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းသူမအလွန်ပြင်းထန်သောစိတ်ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၃။ Capgras syndrome ရောဂါ၏အကြောင်းရင်းများမှာအာရုံအာရုံစူးစိုက်မှု၊ ပုံမှန်အတွေးမမှန်မှု၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်းတို့ပါဝင်နိုင်သည်။  Lewy ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်အမြင်အာရုံစိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု။ 
မူလ Capgras ရောဂါရှိသူများ (အသက် ၃၂ ​​နှစ်သာရှိသေးသည်) သည်သံသယ ၀ င်မှုနှင့်အကြောက်လွန်ရောဂါကြောင့်လိင်မှုကိစ္စကိုပိုမိုဒေါသထွက်တတ်ကြသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရအမျိုးသမီးများတွင် Capgras syndrome ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည်ယောက်ျားနှင့်အတူယောက်ျားများတွင်အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်ပိုများကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
လူနာရှစ်ယောက်ကိုအခြေခံသည့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတွဲများတွင်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ကတ်ကြေးများဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းပေါ်တွင်ဓားကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ပုဆိန်ဖြင့်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဓားဖြင့်ထိုးခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းနှင့်အခြားအသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကရောဂါအခြေအနေကိုစောစီးစွာဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြသည်။ 
Capgras Syndrome ၏ကုသမှု
Capgras syndrome ရောဂါကိုအဓိကအားဖြင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ (သို့) စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာဆေးဝါးများဖြင့်ကုသခြင်းဖြစ်ပြီး Capgras syndrome ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများစုသည်နောက်ခံစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုများနှင့်ဆက်နွယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်တိကျသောအကြောင်းရင်းကိုသိရှိနိုင်ရန် (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးလုံး) သင့်လျော်သောရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆေးဝါးများကိုသတ်မှတ်ထားသည်။
Capgras ထင်ယောင်ထင်မှားလက္ခဏာများကိုခံစားခဲ့ရသော clozapine နှင့် schizophrenia လူနာများအားကုသမှုအကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုကပြောကြားသည်။
အခြေအနေ၏အကြောင်းရင်းမှာအချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းမှုများဖြစ်လျှင်၊ antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်စိတ်ကျဆေးများသို့မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုတည်ငြိမ်စေသူများကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအထိပေးပြီးနောက်ရလဒ်များကိုအကဲဖြတ်သည်။ 
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ စူးရှသောအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများကြောင့် Capgras ရောဂါရှိသူများကို Aripiprazole နှင့် Escitalopram ကဲ့သို့သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကိုဖြေရှင်းရန်ပေါင်းစပ်ဆေးများပေးသည်။ 
၁။ DSM5မှာ Capgras ရောဂါရှိသလား။
Capgras syndrome ရောဂါသည်အကြောင်းရင်းများစွာရှိပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအထိအမျိုးမျိုးသောလက္ခဏာများရှိသော်လည်း၎င်းသည်အထူးသဖြင့် DSM ၅ တွင်မဖော်ပြထားပါ။ သို့သော်၎င်းသည်လှည့်စားသောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုရောဂါလက္ခဏာအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အခြေအနေ။
ကြက်သား chaap စာရွက် sanjeev kapoor ဗီဒီယို
2. Capgras ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သလား?
Capgras လှည့်စားခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကိုက်ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်စီမံခြင်းသည် Capgras ၏ဖြစ်စဉ်များကိုလျှော့ချပြီးဘဝအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
၃။ Capgras ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာလဲ။
Capgras syndrome ရောဂါလက္ခဏာများတွင် olfactory hallucinations, psychotic လက္ခဏာများနှင့် somatic hallucinations များပါဝင်သည်။
lakshman သေသောနောက် urmila ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်
om jai jagdish ယုန် aarti ဗီဒီယို